आखिर किन समुद्रको पानी नुनिलो हुन्छ, नदीको हुँदैन ? जान्नुहोस कारण -आखिर किन समुद्रको पानी नुनिलो हुन्छ, नदीको हुँदैन ? जान्नुहोस कारण -
१५ जेष्ठ २०७७, बिहीबार १९:४२ मा प्रकाशित
एजेन्सी । तपाईलाई थाहा नै होला कि कुनै ठाउँको उचाई समुद्रको सतहबाट नै मापन हुन्छ, अर्थात यो पृथ्वीको सब भन्दा कम सतह हो । के तपाईंले कहिल्यै याद गर्नुभएको छ कि समुद्री पानी किन नुनिलो हुन्छ ? किन नदिको पानी नुनिलो हुँदैन ? हामिले आज यस रहस्यको बारेमा तपाईंलाई जानकारी दिनेछौ । तर तपाईंले यो जान्नु महत्त्वपूर्ण छ कि समुद्र कसरी र कहिले जन्मे ?
वैज्ञानिकहरूको अनुमान छ कि समुद्र आजदेखि ५०० करोड र १० करोड वर्षको बीचमा जन्मिएको हुनुपर्दछ, तर पृथ्वीका विशाल खाडलहरु कसरी पानीले भरिएका थिए र यी विशाल खाडलहरु कसरी बनाइए भनेर अनुमान गर्न गाह्रो छ। यद्यपि यो विश्वास गरिन्छ कि जब पृथ्वीको जन्म भएको थियो, यो आगोको ठूलो बल थियो। जब यो बिस्तारै चिसो हुन थाल्यो, ग्यासका बादलहरू चारै तिर फैलियो। जब यो ग्यास बादल भारी भयो, वर्षाको रूपमा वर्षा भयो। लाखौं बर्षसम्म, यस्तै वर्षा भयो जसले पृथ्वीको विशाल खाडलहरु भरिदिए, जुन हामी आज समुद्रको रूपमा जान्दछौं।
जीव जातका लाखौं प्राणीहरू समुद्री पानीमा बस्छन्। त्यहाँ केहि विशाल प्राणीहरू पनि छन् जस्तै ह्वेल माछा, शार्क फिश, अक्टोपस, एनाकोन्डो सर्प आदि। वैज्ञानिकहरूले समेत समुद्रहरू बारे पूर्ण रूपमा सिकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा, यसको धेरै जसो रहस्यहरू अझै समाधान नगरिएका छन्।
तपाईलाई सायद थाहा होला कि नदी र झरनामा पनि समुद्रको पानी छ । वास्तवमा, बाफ समुद्रीबाट उठ्दछ र यसले बादल बनाउँछ र यसले वर्षा पार्छ। यो पानी नदी र झरनामा जान्छ। यसमा नुन पनि विघटन हुन्छ, तर तिनीहरूको मात्रा थोरै हुन्छ, त्यसैले नदी र झरनाहरुको पानी प्राय: मीठो हुन्छ।
जब वर्षाको पानी समुद्रमा पुग्छ, नुन त्यहाँ थोरै मात्रामा जम्मा हुन्छ। हजारौं लाखौं वर्षको लागि समुद्रमा नुनहरू जम्मा भएको कारण यसको पानी नुनिलो हुन जान्छ। यी नुनहरू सोडियम र क्लोराइड हुन् जसले नुन बनाउँछ।
समुद्री पानी नुनिलो हुनुको पछाडि पनि एक पौराणिक कथा छ। भनिन्छ कि एक पटक समुद्रदेवले देवी पार्वतीसँग विवाह गर्ने प्रस्ताव राखेकी थिइन, तर माता पार्वतीले भगवान शिवलाई उनको पति मानिसकेकाले उनले समुद्र देवको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरे। यसका कारण समुद्र देव क्रोधित भए र भगवान् शिवलाई आमा पार्वतीको अगाडि राम्रो र नराम्रो भन्न थाले। यसमा, माता पार्वती क्रोधित भइन् र उनलाई श्राप दिइन् कि तपाईको मीठो पानी, जसमाथि तिमी घमण्डी छौ र अरुलाई नराम्रो काम गर्छौ, उही पानी आजबाट नुन बनिन्छ, ताकि कोही नपिउँन ।